Ibhixene phakathi kweNkosi namalungu eSishayamthetho eKuwait - Bayede News
Ibhixene phakathi kweNkosi namalungu eSishayamthetho eKuwait
Isithombe: Egypt Independent
Umqeqeshi woSuthu uselinde indweba yeDiski Challenge, lisuke lihlale
Ayivumi ukugudluka inkinga yokukhaphelwa ngamalungu eSishayamthetho kuHulumeni omusha eKuwait oholwa uSheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah. Lokhu kwenzeka nje leli lizwe lingaphansi kwengcindezi kulandela ingcindezi kwezempilo ngenxa yokhuvethe kanye nengcindezi yezomnotho kulandela ukwehla kwenani likawoyela oyinsika yomnotho wakuleli lizwe.
Njengetulo lokumisa ukufungiswa kukaHulumeni omusha, amalungu angama-32 eSishayamthetho asememezele ukuthi angeke abe yingxenye yalolu hlelo. Lokhu kulandele isimemezelo sikaSomlomo weSishayamthetho uMarzouq Al-Ghanim omemezele uLwesibili weviki elizayo njengosuku lokufungiswa.
Ukufungiswa kukaHulumeni omusha kuzoxubana nokulalelwa komuzwa wokungabethembi ubuholi bukaNdunankulu uSheikh Sabah Al-Khalid. Abafaka lesi sicelo uKhalid Al-Otaibi, uThamer Al-Suwait, uBadr Al-Dahoum, uMuhammad Al- Mutair kanye noHamdan Al-Azmi. Lawa malungu eSishayamthetho achaze lesi sicelo njengesibalulekile ngoba uNdunankulu ukhombisa ukuba undlovukayiphikiswa kanti neSishayamthetho akasazi nokuthi siyini.
Kukhona ukukhuluma okuthi konke lokhu kwenzeka nje kuholwa ipolitiki kulandela isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo esivuna ukuxoshwa kwelungu uBader al-Dahoum. Le Nkantolo yamthola enecala uDahoum ngokudelela iNkosi yakuleli lizwe uSheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.
Ngowezi-2016 kwaphasiswa umthetho othi lowo odelela iNkosi akavunyelwe ukuba yilungu leSishayamthetho. Ngeviki eledlule, amalungu angama-34 acela ukuthi indaba kaDahoum idingidwe eSishayamthetho bese ixazululwa ngevoti ngoba iSishayamthetho asikhothameli izinkantolo kodwa siyingxenye kaHulumeni kanxantathu.
USomlomo uMarzouq al-Ghanim akasamukelanga lesi sicelo ebalula ukuthi: “Ubulungu bukaDahoum kulesi Sishayamthetho buhoxisiwe njengokomyalelo weNkantolo YoMthethosisekelo.” Abe ngama-24 amalungu ashiya iSishayamthetho ngokuzelwana noDahoum emuva kwalesi simemezelo.
Lawa malungu abe esekhipha isitatimende esithi: “Amalungu angama-32 azosizila iSishayamthetho, njengamanje kukubantu baseKuwait ukuthi baqaphe futhi babakhiphele obala labo abafuna ukuziqhelelanisa nezithembiso zabo.”
Esephelele amalungu eSishayamthetho angama-60 kanti ngokoMthethosisekelo angama-33 kuphela amalungu okumele abe khona ukuze kufungiswe amalungu amasha eKhabhinethi. Akwazeki ukuthi kuzokwenzakalani ngoba ongqongqoshe bebodwa bali-16 okusho ukuthi badinga ozakwabo abali-17 kuphela ukuthi bagcotshwe nokuyinto ibonakala ingase yenzeke.
Kwenzeka into engajwayelekile kuleli lizwe ukuthi iKhabhinethi elivunwa iNkosi likhaphelwe ngamalungu eSishayamthetho. Nakuba iSishayamthetho saseKuwait sizimele futhi sinamandla okuthatha izinqumo kowa konke lokhu kwenzeka ngokugunyazwa iNkosi.
Kubonakala isimo simvuna u-Ahmadinejad
Amalungu eSishayamthetho ayakwazi ukuphakamisa umthetho omusha aphinde ahlome ngemibuzo ongqongqoshe kodwa izwi lokugcina liqhamuka eNkosini kanti zonke izikhundla eziphezulu kuHulumeni zithathwa amalungu omndeni weNkosi. Emuva kokuveza ukungenami ngamalungu eKhabhinethi amasha ekuqaleni konyaka, bonke ongqongqoshe besula okwacasula iNkosi yasihlakaza iSishayamthetho zili-18 kuNhlolanja.
Lo mdonsiswano usufake leli lizwe ngaphansi kwengcindezi kwezomnotho kwazise sekuphele inyanga kungekho Khabhinethi kanti nezinhlelo zokwenza izinguquko ekubusweni kwaleli lizwe zibonakala sezikhapheliwe. Ukungahoshelani phakathi kweKhabhinethi neSishayamthetho sekuthuse abaningi eKuwait njengoba lokhu kuyinto eyagcina ukwenzeka ngowe-1962 ngesikhathi kunombango ngezingxenye ezithize zoMthethosisekelo omusha owanikeza wonke amandla iNkosi.
Ngokwesaba ukulahlekelwa amandla nesikhundla lwagcina lugobile uphondo eNkosini yavuma ukuphunyula amatomu kwezinye izindawo. Ukungabi bikho kweKhabhinethi sekwenze kwahamba kancane uhlelo lokugomela ukhuvethe nokubuyisa esimweni umnotho oxegiswa ukwehla kwenani lemiphongolo kawoyela.
Amalungu eSishayamthetho kuleli lizwe ahlala iminyaka emine kanti ngokwejwayelekile anawo amandla okubuza imibuzo ngezinqumo zeKhabhinethi neNkosi okungakho sekuxaka uma sekukhona osekuhoxiswa ubulungu babo ngenxa yezinto abazisho ngaphakathi eSishayamthetho.
nguNtobeko Shozi Apr 2, 2021